नेपाली कहाँ कम छन् ?
कोरोना महामारीको ओखतीका लागि विश्वका बैज्ञानिकहरु रातदिन एक गरिरहेका छन् । अनेक प्रयोगहरु भइरहेका छन् र छिटै खोप निकाल्ने तैयारीमा जुटेका छन् । तैयार भएका खोपहरुको हजारौं हजारमा प्रयोग गर्ने काम पनि भइरहेको छ । केही समयभित्रै कोभिड– १९, कोरोना भाइरसको खोप निस्कने विश्वास सबैतिर गरिएको छ ।
यही सिलसिलामा नेपालका आयुर्वेदिक र एलोपेथिक डाक्टरहरु पनि खोप निकाल्ने प्रयत्नमा जुटेका छन् । देउराली जनता फर्मास्यूटिकल्सले बिभिन्न ओखती उत्पादन गरिरहेको सन्दर्भमा कोरोना भाइरसलाई प्रभावकारी हुने भनेर फेभिर २०० नाम दिएर ओखती उत्पादन गरेको मात्र होइन, हजारौंमा प्रयोग गर्न थालेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । यो खुशीको कुरा हो । नेपाल पनि कम छैन । नेपालले पनि कोरोनाको ओखती निकाल्ने प्रयत्नमा जुट्नु प्रशंसनीय र स्वागतयोग्य कार्य हो ।
नेपालमा कोरोना भाइरसले झण्डै ११ सय मानवीय क्षति भइसकेको छ । छिटोभन्दा छिटो ओखती आउन सकेन भने यो महामारी झन झन फैलदै जाने पक्का छ । सरकारले लकडाउन नगर्ने नीति लिएको छ । अदालतले निशुल्क पीसीआर टेस्ट गर्न र अस्पतालहरुमा भेन्टिलेटरसहितको सुविधा सर्वसुलभ गर्न आदेश दिए पनि सरकारले टेरेको छैन । भ्रष्टाचार जति पनि हुने, जनतालाई उपचारको सुविधा दिन नसक्ने सरकारको लोकप्रियता घट्दै गएको छ । दशैं तिहारका कारण मानिसहरु घरघर गएका छन्, सहर बजार फर्कनेक्रम पनि बढेको छ । यसका साथै कोरोना भाइरस समाजमा फैलिसकेको अवस्था पनि छ । कतिपय डाक्टरहरु त नेपालमा इटलीको जस्तो लाशैलाश, सम्भाल्नै नसकिने अवस्था आउने खतरा पनि देखाइरहेका छन् ।
यस्तो भयावह स्थितिमा नेपालले कोरोना भाइरसको उपचारमा औषधि प्रयोग गर्न थाल्नु सह्राहनीय कार्य हो । सरकारले यस्ता कार्यलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ, चिकित्सा अनुसन्धानमा लागेकाहरुले पनि सघाउनु पर्छ । कतै नेपालबाटै पो कोरोना महामारीको औषधि निस्कने पो हो कि ? यो प्रयास सफल होस्, शुभकामना ।